Tena ilaina ny fanohanan'ny governemanta amin'ny tanjona vaovao tsy miandany amin'ny karbônina
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Tena ilaina ny fanohanan'ny governemanta amin'ny tanjona vaovao tsy miandany amin'ny karbônina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Tena ilaina ny fanohanan'ny governemanta amin'ny tanjona vaovao tsy miandany amin'ny karbônina.
Mitaky tanjona fampihenana karbônina lehibe kokoa ny governemanta maneran-tany. Miharihary anefa ny tsy fahampian’ny drafitra mivaingana amin’ny fomba hanatanterahana izany na ny famatsiam-bola azo.
Ny tsy fahampian'ny fanohanan'ny governemanta amin'ny fiaramanidina dia miharihary, ary ilaina ny fampiasam-bola bebe kokoa.
Tsy ampy ny fanerena an'i Angletera hampiditra firenena hiditra ao amin'ny 'International Aviation Climate Ambition Coalition' nambara tao amin'ny COP26.
Ny SAF dia ho fiatoana tsara ho an'ny sidina mba hampihenana ny entona entona raha toa ka dinihina ny safidy herinaratra maharitra.
Ny zotram-piaramanidina sy ny indostrian'ny sidina midadasika dia hiady mafy hanatratra tanjona tsy miandany amin'ny karbônina fotsiny. Ny governemanta dia tsy maintsy mihetsika amin'ny fanomezana fampiasam-bola lehibe manaraka COP26 mba hahazoana antoka fa misy hetsika misy dikany.
COP26 dia nanindry ny indostrian'ny sidina hanamafy indray ny fahavononany hampihena ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Vao haingana no nahitana fa ny 45% amin'ireo mpamaly eran-tany dia nilaza fa ny tontolo iainana no zava-dehibe indrindra amin'ny lafin-javatra momba ny tontolo iainana, ara-tsosialy ary ny fitantanana (ESG) amin'ny lafiny ara-nofo.
Noho ny olana ara-tontolo iainana lasa zava-dehibe amin'ny mpanjifa, ny indostria dia tsy maintsy mihetsika. Na dia maro aza ny tetika, vondrona miasa ary fanambarana efa nambara mialoha ny fihaonamben'ny COP26, dia tsy ho ampy fotsiny ny hampihenana ny entona entona ao amin'ny indostria ary hamorona fiovana manan-danja. Miharihary ny tsy fahampian'ny fanohanan'ny governemanta amin'ny fiaramanidina, ary ilaina ny fampiasam-bola.
Nanohana ny fitadiavan'ny sehatra hafa ho lasa mitsinjo ny tontolo iainana ny governemanta. Ohatra, ny mpanamboatra fiara dia nahazo fanohanana sy fandrisihana miely patrana hifindra amin'ny famokarana fiara elektrika, saingy tsy nahazo saina na fampiasam-bola mitovy ny indostrian'ny fiaramanidina.
Mitaky tanjona fampihenana karbônina lehibe kokoa ny governemanta maneran-tany. Miharihary anefa ny tsy fahampian’ny drafitra mivaingana amin’ny fomba hanatanterahana izany na ny famatsiam-bola azo. ny UKTsy ampy ny faneren'ny firenena hanatevin-daharana ny 'International Aviation Climate Ambition Coalition' nambara tao amin'ny COP26.